Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo la kulmay wafdi ka socday Hay’ada HALO TRUST | Allbalcad Online
Home WARARKA Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo la kulmay wafdi ka socday Hay’ada HALO...
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo la kulmay wafdi ka socday Hay’ada HALO TRUST
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid ayaa maanta Madaxtooyada Galmudug ee magaalada Caabudwaaq ku qaabilay Wafdi ka socday hay’adda HALO TRUST oo ka shaqeeya arrimaha miino baarista oo dhawaan ka howlgalaya deegaannada Galmudug.
Mas’uuliyiinta ka socotay Hay’adda HALO TRUSTt oo dhowr Xubnood ka kooban ayaa la sheegay, inay qorsheenayaan furitaanka Xaafiis qaabilsan aruurinta Haraadiga walxaha qarxa oo ku badan deegaanadan Galmudug.
Waftiga ayaa markii uu soo dhammaaday kulan ay la qaateen Madaxweyne Ku xigeenka Galmudug waxaa warbaahinta la wadaagay socdaalka Waftiga Wasiir ku xigeenka Wasaarada Amniga Mudane Burhaan Ismaaciil Xirsi.
Previous articleXildhibaan Xiddig: “Shir baan qabaneynaa guddoon cusub baan dooranaynaa.”
Next articleMadaxweynaha Brazil oo Maxkamad ku amartay inuu Magdhow siiyo gabar weriye ah